UASDA, UALDI KUNYE NOTESCO BAKHUPHA UKUTYA OKUKHAWULEZILEYO OKUKHUMBULA UKUTYA OKUZIINKOZO, INKUKHU NOKUNYE - IINDABA
I-Tesco, i-Aldi kunye ne-Sainsbury's zikhuphe ukutya okungxamisekileyo, kunye nezinto ezininzi kuluhlu lweentengiso ezingcolileyo ezingathandabuzekiyo.
I-Arhente yeMigangatho yokutya ikhuphe izilumkiso ngenkukhu efriziwe, iidiphu ezinencasa kunye nemihla yokuqwalaselwa kwezinto ezibhalwe ngokungachanekanga okanye zinokubandakanya into encinci enobungozi.
Abanye kusenokwenzeka ukuba bangcoliswe yiplastiki.
uhlaselo lwetitan isizini yesi-4 dub hulu
Kwezinye iimeko, ukuthengiswa kubandakanya izinto ezilingana namaqanda, ezingathethwanga ngokufanelekileyo kwileyibhile, Iingxelo zeMirror.
Xa imveliso ikhunjulwa, iArhente yeMigangatho yokutya yabelana ngeenkcukacha malunga nento ekufuneka uyenzile xa uthengile ukuthengisa, ukongeza kulwazi oluneenkcukacha lokuba kutheni imveliso ikhutshwa kwiikhabhathi.
Yatsho ukuba nabani na onazo naziphi na izinto ezingaphantsi kufuneka aye kwivenkile yakhe ekufuphi ukuze abuyiselwe imali okanye enye into.
Aldi ivenkile ethengisa uphawu
Viggo mortensen nkosi yamakhonkco ihashe
Isaphulelo eJamani u-Aldi uxelele abathengi abathenga i-Harvest Morn Crisp Rice cereal yabo kufuneka bayibuyisele ezivenkileni ngokungxamisekileyo.
Imveliso ifunyenwe ibandakanya izinto zeplastiki, inika imveliso ukuba ayikhuselekanga ukuyitya. Ichaphazela imigqomo engama-375g eneekhowudi zebhetshi 10470953, 10480953, 10490953 kunye nomhla wokuphela kukaNovemba 2021.
UMorrison ukhumbula i-Choco Crackles ngenxa yeepakethe ezithile eziye zafunyanwa zibandakanya izinto zeplastiki.
Isitolo sathengisa ukuba kuchaphazela imigqomo engama-375g ngomhla wokuphelelwa kukaNovemba 2021.
Ubukho bezinto zeplastiki benza ukuba le mveliso ingakhuselekanga ukuba ityiwe, iArhente yeMigangatho yokutya yatsho.
UAsda ukhumbula iipakethi zakhe ezimbini zeNkukhu zoqobo zeNkukhu Chargrill ngenxa yomkhondo we-salmonella ofunyenwe ngaphakathi kwimveliso.
yayiphi ikrisimesi engavalwanga ifotwa
Ichaphazela ubungakanani bepakethe ye-170g kunye nebhetshi yekhowudi 31120953 kunye nokuphelelwa komhla kaSeptemba 5, 2022.
UTesco ukhumbula iTesco Tzatziki ngenxa yoko ibeka iqanda elingachazwanga.
Ngenxa yempazamo yokuvelisa, inani leebhetshi zifakwe ngokungalunganga njengeTesco Sour Cream kunye neChive Dip, njengelinye.
Oku kuthetha ukuba imveliso yinto enokufikeleleka nokuba yingozi kuye nawuphina umntu onengxaki yokunganyangeki okanye ukunganyamezelani kwiqanda.
Ukukhumbula kuchaphazela i-200g iibhafu ngokusetyenziswa komhla we-12/4/21.
Imveliso yokutya kaSainbury ikhumbula kuluhlu
(Umfanekiso: Leon Neal / Getty Izithombe)
I-Sainbury's ithatha amanyathelo okhuseleko lokukhumbula ukungcamla umahluko kwiintsuku zeMedjool ngenxa yokuba zinokuthi zingcoliswe yiHepatitis A.
I-Big Four grocer ithe zonke iipakethi ezingama-200g kunye nama-500g zichaphazelekayo. Ukuba uthenge imveliso buyisela ezivenkileni ukuze ubuyiselwe imali epheleleyo.
Oku kuthengiswa kunokwenzeka ukuba kungcoliswe yiHepatitis A. Iimpawu ezibangelwa yiHepatitis A ngesiqhelo iqulathe umkhuhlane, isicaphucaphu, isitshingitshane, isisu, urhudo, umchamo omnyama kunye ne-jaundice (ukutyhefa kwemingxunya yolusu kunye nolusu).
Izaziso zenqaku lentengiso zibonisiwe kuzo zonke iivenkile zaseSainbury ezibala imihla.
Iifilimu zekrisimesi zeCameron mathison
Izigaba: Inetflix Iindaba Umqala
jennifer katharine amasango wiki
U-dr kirby utshatile
Starbucks iiyure zosuku lwesikhumbuzo
usisi abafazi meri amagqabi
hannah kepple kunye xolo maridueña
Ixesha lomlilo chicago 9 isiqendu 11